केपी ओलीलाई ‘लखेट्ने’ बेला भइसक्यो र ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← कर्मचारी, सेना र प्रहरीले रक्सी र कुखुरासँग साटे राहत
ऊ मन्त्री ! साइकलमा ! →
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शासन सम्हालेको तीन महिना पनि पुगेको छैन । एकदमै प्रतिकूल अवस्थामा घीनलाग्दा भित्री र बाहिरी चलखेललाई चिरेर उहाँ सत्तामा पुग्दा मुलुकको स्थिति जस्तो थियो, त्यसमा आजसम्म ताात्विक सुधार आएको छैन ।
कसैबाट लुकाउनुपर्ने कुरा छैन, यसको कारण पनि सबैलाई थाहा छ । नेपालमा संविधान जारी गर्दा आफ्नो मानमर्दन भएको ठानिरहेको भारतले नाकाबन्दी खोलेको छैन । बरु कार्यकर्ता नआएर निराश बनेका मधेसी दल थाकिहाल्लान् तर भारतले आफ्नो बनिबनाउ वक्तव्यमा कुनै सुधार ल्याएको छैन ।
केपी ओलीको सरकारले मुख्यरुपमा काम गर्न नसक्नुको कारण एमाओवादी हो । ’cause, जति पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय छन्, ती सबै एमाओवादीले कब्जा गरेको छ । देशको शान्ति सुरक्षाको हालत यस्तो छ, कालोबजारी चरमचुलीमा छ, खुलेआम तस्करी भइरहेको छ । त्यसको जिम्मा गृहमन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ, जुन एमाओवादीले सम्हालिरहेको छ । अनि पेट्रोलिय पदार्थमा अनियमिता, कालोबजारी र अनियमित किनबेच वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत भइरहेको छ, त्यो पनि एमाओवादीकै जिम्मामा छ ।
केपी ओलीको सरकारले मुख्यरुपमा काम गर्न नसक्नुको कारण एमाओवादी हो । ’cause, जति पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय छन्, ती सबै एमाओवादीले कब्जा गरेको छ
कठोरतापूर्वक भन्नैपर्ने हुन्छ, अबका दिनमा केपी ओलीसँग विगतमा जस्तो आशा नराखे हुन्छ । ’cause, उहाँको फरक व्यक्तित्व माओवादी उग्रवामपन्थको आलोचनाको जगमा निर्माण भएको हो भन्ने तथ्य सबैलाई थाहै छ । अरुले बोल्न नसकेका कुरा निडरतापूर्वक र सम्झौताहीन रुपमा बोलेकै कारण उहाँलाई माओवादी इतरका मानिसहरुले मन पराएका हुन् ।
के हामी यसो भन्न चाहन्छौँ ?(अन्लाईनखबर )